Sudaan oo mar kale digniin culus u dirtay Itoobiya. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sudaan oo mar kale digniin culus u dirtay Itoobiya.
Sudaan oo mar kale digniin culus u dirtay Itoobiya.
Wasiir u hadlay dalka Sudan Yasser Abbas ayaa sheegay in tallaabo kasta oo Ethiopia ay kaligeed u qaaddo inay ku buuxiso mashruuceeda biya xireenka koronta ee bisha Jully inuu si toos halis ugu yahay ammaanka qaranka ee Sudan.
Yasser Abbas oo ah Wasiirka Kheyraadka Biyaha ee dalkaasi ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay, in Sudan ay soo jeedinayso in door dhexdhaadin ah ay ku yeeshaan dalalka Mareykanka, ururrada midwoga Yurub iyo modwga Africa, si meesha looga saaro ismari waaga wadaxaajoodka ee la xiriira biya xireenka, ee dheexay dalalka Sudan Masar iyo Ethiopia.
Maqaal horeXarig ka dhan ah dadka ka soo hor jeeda madaxda HirShabeelle oo ka socda Beledweyne
Maqaal XigaTaliyihii Ciidanka NISA ee Magaalada Dhuusamareeb oo Qarax lagu dilay